Ihe omuma ihe omuma esi eme ka ndu gi di mfe karia SEO
Ọtụtụ ụlọ ọrụ n'oge a na-enwe ọganihu site na iji ọtụtụ e-commerce setups. Ọ dị mkpa ịmepụta mkpokọta weebụ nke nwere ike ịntanetị siri ike. N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ọtụtụ ikpe mgbe mmadụ na-enweta uru dị ogologo oge nakwa dị ka ndị ahịa na-eleta otu weebụsaịtị. Ị ga-atụle ịme ụfọdụ usoro ahịa na saịtị gị iji mee ka ọ nwee ike ịnweta ọtụtụ ndị ahịa site na gburugburu weebụ.
Ntọala ịntanetị ọ bụla na-achọ ụfọdụ ịntanetị iji nweta ihe ịga nke ọma - ssd peru. Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) bụ ụzọ ahia nke azụmahịa nke ndị nwe ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta ndị ahịa ọhụrụ. Ọ na-enyere mkpokọta weebụ aka ịme ka ọkwa ya dị elu wee banye n'elu Google Search. Ị ga-enwe ike irite uru site na akụkụ dị oke nke ọnụ ọgụgụ ndị na-achọ usoro ndị a na netwọk ọchụchọ. Ụfọdụ n'ime ọrụ SEO ndị ọzọ nwere ike ịdebe ebe nrụọrụ weebụ gị dị n'usoro nduzi a, nke Lisa Mitchell na-enye, bụ onye na-ahụ maka ahịa ndị ahịa nke Ụlọ ọrụ ntanetị .
Mgbe ị na-eji SEO, akụkụ mbụ nke mgbasa ozi ahịa niile na-eme nchọpụta dị mkpirikpi. Iji mkpụrụ okwu dị mkpa pụtara na ị ghaghị ịchọta akụkụ dị oke nke okporo ụzọ na-achọ ndị ahụ, dị ka ọnọdụ ị na-anọ na peeji nke Search Engine Result pages (SERPs). Google Adwords na LongTail Keywords Pro nwere ike inyere gị aka ịhọrọ isiokwu kwesịrị ekwesị maka saịtị gị. N'otu ihe ahụ, ị ​​nwere ike iji nhọrọ ndị ọzọ dịka ngwa Moz na SEMRush.
Ihe okike di iche iche bu ihe bara uru mgbe ime SEO. Ị nwere ike ịnya onye nweere onwe gị nke ọma iji rụọ ọrụ ahịa ịntanetị nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Njikwa ikike bụ ihe ọzọ nwere ike ịchọrọ uche gị. Ị nwere ike ime ka ngalaba gị dị mkpa site na ngwa nke backlinks. Ntughari nkwado na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ nweta ikike site na mpaghara ndị ọzọ n'ime ọrụ niche.
Nyocha njikwa search engine bụ usoro ahịa ịntanetị bara uru. Nnukwu ụlọ ọrụ na-enweta ụfọdụ n'ime ndị kasị mma ahịa ha n'Ịntanet site n'enyemaka nke SEO. Ịrụ ọrụ SEO dị irè na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịghọ atụmatụ bara uru, karịsịa na mgbasa ozi ịntanetị. Site na SEO, ụlọ ọrụ nwere ike nwee ike idozi ọtụtụ ndị ahịa ogologo oge nakwa ka ha na ndị ahịa ha nọgide na-azụ ahịa. Onye ndu SEO a nwere ike inyere aka n'ịzụ ahịa ịntanetị nweta ụfọdụ mkpụrụ osisi. Ị nwere ike ime ọtụtụ mgbanwe bara uru na ebe nrụọrụ weebụ gị ma nweta ọtụtụ ndị ahịa.